Iimpazamo ezi-3 eziNtengiso eziPhambili Amashishini amatsha enza | Martech Zone
Kutheni uqale ishishini lakho? Ndiza kubheja kwifama leyo kuba "bendifuna ukuba ngumthengisi" ibingeyompendulo yakho. Nangona kunjalo, ukuba ufana namakhulu abanini bamashishini amancinci endikhe ndasebenza nawe mhlawumbi uqaphele malunga nemizuzwana engama-30 emva kokuba uvule iingcango zakho ukuba awuzange ube ngumthengisi, ngekhe ubengumnini weshishini elincinci ixesha elide. Kwaye, inyani iyaxelwa, iyakukhathaza kuba ungakonwabeli ukuthengisa kwaye ikuphazamisa kwezinye iindawo zeshishini lakho.
Ewe, ndineendaba ezimnandi. Ngelixa kungekho ndlela yokuphelisa isidingo sokuba uthengise ishishini lakho, ungasusa ukukhathazeka kwakho ngokujongana neempazamo ezintathu zentengiso endizibonayo zenziwa ngamashishini.
Impazamo # 1: Gxila kwiimetriki ezingalunganga
Umthamo omkhulu wedatha okhoyo wokuhlalutya ukuthengisa namhlanje uyingqondo. Uhlalutyo lukaGoogle, ngokwalo, lubonelela ngedatha eninzi kangangokuba ungatya yonke impelaveki uyayihlalutya - ukuyifumana kuphela ekugqibeleni kukhokelela kwizigqibo eziphikisanayo kuxhomekeke ekubeni yeyiphi idatha oyibeka phambili. Kwaye yile datha yakho yewebhusayithi! Ukunika ingxelo ngentengiso yedijithali, imidiya yoluntu kunye nezinye iindawo zentengiso zisoyikisa kwaye ziyaphikisana.
Ukufikelela kuyo yonke loo datha yinto elungileyo, kodwa inokusebenzela ukuphazamisa abanini bamashishini abancinci kwidatha ebaluleke kakhulu. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba unciphise ukugxila kwakho kwi-metric ezimbini kuphela ekubaluleke ukuba zibaluleke xa kufikwa kwintengiso: Iindleko zokufumana uMthengi kunye neXesha lokuPhila loMthengi. Ukuba ukuhamba kwemali kungumba uya kufuna ukugxila kwiXabiso leNyanga okanye loNyaka loMthengi endaweni yeXesha lokuPhila, kodwa umgaqo osisiseko uyafana. Ukuba ixabiso (okt ingeniso) yomthengi likhulu kunexabiso lokufumana umthengi, ukwimo entle. Amashishini anenzuzo awakhelwanga kwimilinganiselo yamampunge njengokucofa, ukubonakala kunye nokuthandwa. Amashishini anenzuzo akhiwe ngeemetrikhi ezinokuthi zifakwe ebhankini, ke jolisa ingqalelo yakho kwezo.
Impazamo # 2: Gxila kwiindlela ezingalunganga
Ngokuqinisekileyo akukho kunqongophala kwamaqhinga kunye nezixhobo apho amashishini amancinci anokuchitha khona ukuthengisa iidola namhlanje. Ngelishwa, uninzi lwamashishini amancinci atsalela kuphela kwiindlela ezinomdla kwaye angazihoyi iindlela zokuthengisa eziyimfuneko. Bajolise lonke ixesha labo kunye nemali kwiindlela ezivelisa ukuthandwa, abalandeli, kunye nokuvula ngelixa betyeshela amaqhinga abalulekileyo akhokelela kuguquko, ukugcinwa kwabathengi, kunye nodumo kwi-Intanethi oluvelisa iidola. Iziphumo sisicwangciso sentengiso esigcina sixakekile kwaye siziva silungile kodwa ingxelo yengeniso ebenza bagule isisu.
Endaweni yokuleqa zonke ezona ndlela zishushu zokuthengisa, abanini bamashishini abancinci kufuneka bajolise kuqala ekwandiseni ingeniso evela kubathengi bakho abakhoyo, ukwandisa ipesenti yezikhokelo eziba ngabathengi, kunye nokunikezela ngamava abathengi abenza abalandeli abanomdla. Ezo zinto zibalulekileyo sisiseko seshishini elinenzuzo, elingenaxinzelelo. Ngokuqinisekileyo abayi kuyenza ishishini lakho lipholile njengokutsiba kwi-bandwagon entsha eshushu yeendaba zentlalo, kodwa baya kukwenzela imali- kwaye ayisosizathu sokuba uqale ishishini lakho kwindawo yokuqala?
Impazamo # 3: Gxila kwiBrand engalunganga
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, amandla okuchaza ishishini 'uphawu lutshintshile ukusuka kwishishini ukuya kubathengi. Kwiminyaka elishumi eyadlulayo amashishini ahamba ngendlela ebuhlungu yokuchaza uhlobo lwentengiso kunye nentengiso enezixhobo ukuxelela abathengi ukuba bacinga ukuba luphawu luni. Yonke itshintshiwe. Kwilizwe lanamhlanje, abathengi bachaza ishishini 'uphawu kunye neteknoloji yokunyusa kunye nemithombo yeendaba zentlalo ukuxelela ishishini-kunye namakhulu, ukuba kungangamawaka, abanye abathengi- ukuba luphi uphawu lwabo. Kwaye bayayenza 24/7/365.
Ngelishwa, uninzi lwamashishini (amakhulu kunye namancinci) asilele ukulungelelanisa intengiso yawo ukubonisa olu tshintsho. Baqhubeka ukugxila kwintengiso ekuxeleleni nasekuthengiseni. Bathumela ii-imeyile ezininzi, iikhadi zeposi zetemplate, kwaye baxhomekeke kwizaphulelo ukugcina abathengi babo. Iimpawu ezichazwe ngumthengi, kwelinye icala, zijolise kwintengiso yabo kumava abathengi kunye nolwalamano. Bathumela amanqaku enkosi, ii-imeyile zokwaneliseka kwaye bahambisa amava angahambelaniyo, akumgangatho wehlabathi ukugcina abathengi babo.
Amaqhinga ayafana, kodwa kugxilwe kwahlukile. Qala ngokuchaza amava ofuna ukuwahambisa kubathengi bakho kwaye emva koko wakhe urhwebo lwakho malunga nokukhuthaza amava kunye nemisebenzi yakho ekuhambiseni kuyo. Akukho nto iphosakeleyo ngokuthatha isigqibo malunga nokuba ufuna ukuba yintoni uphawu lwakho, kodwa ekupheleni kosuku ngabathengi abaya kuthatha isigqibo sokuba yile nto iyiyo.
tags: uhloboIi-imeyile ezininziukugcinwa kwabathengiizaphuleloi-google analyticskukhokelelaIindlela zokuthengisaamaqhinga okuthengisaiindlela zentengisoImidiya yokuncokolaTechnologyiikhadikhadi zeetemplate
UMark Montini liGosa eliyiNtloko lesiPhumo kwi Amacandelo e-m2M, Inkampani yaseAtlanta esekwe kwintengiso yokuthengisa ngokuthengisa egxile kubuchule bokudibanisa itekhnoloji, ukuthengisa kunye nedatha ukukhulisa umgca wabathengi babo. Waziwa ngokwazi kwakhe ukuyila iinkqubo zokuthengisa ezisasazwe ngokupheleleyo, uMarko uncede ii-franchise, iinkampani ze-Fortune 500, ukuqala, ukungabinangeniso, kunye nemibutho yezopolitiko inyusa ingeniso.